IiNgcaciso zeeNzululwazi zoLondolozo- Ilungelo laseMelika lokwazi
Umcimbi weNyaniso-uNjingalwazi uyala ukuLungisa iimpazamo kwiPhepha elitsha leNzululwazi lokufumana iingxaki ngeGlyphosate
ezaposwa ngomhla Juni 5, 2019 by UCarey Gillam
(Ihlaziyiwe ngoJuni 5 kunye nezimvo ezivela kwiiNgxelo zeNzululwazi)
Ababhali bephepha le- iphepha elisandula kupapashwa Ukuvavanya iimpembelelo zokuvezwa kweyeza elisetyenziswa kakhulu emhlabeni kubhengeze iindaba ezothusayo.
The Iqela elivela eWashington State IYunivesithi ifumanise ukuba inzala yeempuku ezivezwe yikhemikhali glyphosate iphuhlise iprostate, isifo sezintso kunye nesifo se-ovari, ukutyeba kakhulu kunye nokuzalwa okungaqhelekanga. Iziphumo, zapapashwa ngo-Epreli kwiphephancwadi lezenzululwazi Iingxelo zeSayensi, Yongezwe kwingxoxo-mpikiswano yomhlaba malunga nokhuseleko lwe-glyphosate kunye ne-Monsanto's Roundup kunye nezinye izinto ezibulala ukhula ezisekwe kwi-glyphosate.
Kodwa mhlawumbi okumangalisa ngakumbi kunezo ndaba, iqela lophando lathi kwiphepha labo ukuba i-Arhente yeZizwe ngezizwe yoPhando ngomhlaza (IARC), ingcali yenzululwazi yeWorld Health Organisation, "ikurhoxisile" ukufumanisa kwayo ukuba i-glyphosate ngumntu onokwenzeka umhlaza.
Impazamo yenye yamaphepha axelwe kubabhali kwinyanga ephelileyo ekusafuneka ilungisiwe. Kodwa akukho namnye, mhlawumbi, okrelekrele ngakumbi kunaleyo malunga ne-IARC.
IARC ikhuphe iphepha elide Ngo-2015 okugqitywe ngokuhlela i-glyphosate njenge-2A yomntu obangela i-carcinogen. Ukwahlulahlula i-IARC kubangele amawaka amatyala ngokuchasene neMonsanto, umcocisi wexesha elide weRoundup kunye nezinye iiglyphosate herbicides kunye nefuthe kwingxoxo kwihlabathi liphela. Ulwahlulo lwe-IARC luye lwanceda ukukhuthaza amazwe amaninzi aseYurophu ukuba aqale ukushenxisa ukunciphisa okanye ukuvala ukusetyenziswa kwe-glyphosate. Izixeko, izithili zesikolo kunye nabathengisi kulo lonke elaseMelika nabo bayekile ukusebenzisa okanye ukuthengisa iimveliso zeglyphosate. Umnini wase-Monsanto waseJamani uBayer AG uphulukene neepesenti ezingama-40 zexabiso lesabelo sakhe ngenxa yenkxalabo eqhubekayo malunga nemichiza yokutshabalalisa ukhula yeMonsanto's glyphosate.
Kodwa ngokweqela le-WSU, ukwahlulwa-hlulwa kwe-IARC okubangelwe kuko konke kwarhoxiswa ngo-2016. Babhala:
“Ngo-Matshi 2015 i-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando ngomhlaza yahlulahlula i-glyphosate njenge-carcinogen yeBanga lesi-2a esekwe kukuxhaphaka kwesibindi kunye nezintso kwizifundo zokutya okungapheliyo. Kungekudala emva koko, le ngxelo yachithwa ngo-2016. "
Ukurhoxiswa kwe-IARC kokufumanisa kuya kuba kubaluleke kakhulu. Ewe kunjalo, iMonsanto kwi-2015 yafuna ukurhoxa kodwa i-IARC iwukhusele umsebenzi wayo, njengoko uninzi lwezazinzulu ezizimeleyo ezivela kumazwe amaninzi. Ngokukodwa, i-IARC ayikaze ikurhoxise ukufunyanwa kwayo kwe-glyphosate njenge-2A enokubangela i-carcinogen.
Ukwahlulahlulwa akukatshintshwa kwaye kusasebenza, utshilo isithethi se-IARC uVeronique Terrasse.
Iqela lophando lase Washington State lalikhokelwa ngu UMichael Skinner, Unjingalwazi weSikolo seWSU seSayensi yezebhayoloji. Kubonakala ngathi impazamo iya kuba lula ukuyilungisa. Kodwa xa kuqhakamshelaniswa malunga nale mpazamo, uSkinner wathi wayengenanjongo yokulungisa ingxelo kuba akukho mfuneko yolungiso. Uye wathi uxelele oososayensi abaye baphakamisa umba kunye naye ukuba babhalele umhleli wencwadi.
"Inkcazo yeRetract ibandakanya" Ukuzoba okanye ukubuyela umva okanye ukubuyela "okanye" ukurhoxa okanye ukubuyela umva "okanye" ukuphinda ujonge kwakhona okanye ukubuyela umva ", yiyo loo nto eli gama lisetyenzisiwe kule meko," utshilo uSkinner kwi-imeyile impendulo.
Iingxelo zezeNzululwazi ziyinxalenye yeNdalo, ulindixesha weveki ngeveki ozibiza ngokuba "upapasha olona phando luqwalaselweyo kwezontanga kuwo onke amabakala ezenzululwazi nobuchwephesha…"
Isithethi se IiNgxelo zezeNzululwazi, wathi: "UXa nayiphi na imiba iphakanyisiwe nge Iingxelo zeSayensi ngamaphepha esiwapapasileyo, siwaphanda ngononophelo kwaye sizakuthatha amanyathelo apho kufanelekileyo.
Ucacisile lo nto Iingxelo zeSayensi Ijenali evulekileyo yokufikelela kwi-Intanethi "kusapho loPhando lweNdalo lwejenali" kodwa ngokuzimeleyo kuhlelwa ngokuzimeleyo kweNdalo.
Izazinzulu zangaphandle ezininzi zichonge ezinye iimpazamo eziyinyani ephepheni, kwaye zathi zisongela ukujongela phantsi ukuthembeka kweziphumo zizonke.
"Oku kufanele ukuba kuthathwe ngokujonga koontanga," utshilo UChuck Benbrook, Ingcali yezoqoqosho kwezolimo kunye nengcali ye-glyphosate ethi uphando lwayo lwenzululwazi lukhankanywe ngokungalunganga liqela leSkinner ephepheni labo. UBenbrook uqhakamshelene no-Skinner ngo-Epreli kwangoko emva kokuba iphepha lipapashiwe libeka iimpazamo ezininzi ezifuna ukulungiswa. UBenbrook uqaphele ukuba zonke iingxaki azaziyo zazikwiphepha kwaye zazingenanto yakwenza nezigqibo zesayensi.
“Kutheni engakhange azilungise ngokukhawuleza iimpazamo eziyinyani… kunzima ukuyiqonda,” utshilo uBenbrook.
Phakathi kwezinye iimpazamo eziyinyani:
* Eli phepha lathi i-glyphosate ibangela phantse iipesenti ezingama-72 zokusetyenziswa kwezibulali zinambuzane, icaphula uphando lukaBenbrook. Uphando lukaBenbrook aluthethi loo nto, kodwa ithi iipesenti ezingama-72 zeglyphosate efafazwe kwilizwe jikelele sele isetyenzisiwe kule minyaka ilishumi idlulileyo.
* Iphepha leSkinner lithi udidi lwe-IARC lwe-glyphosate lwalusekwe kukuxhaphaka kwesibindi kunye nezintso kwizifundo zokutya okungapheliyo. Ngapha koko, ulwahlulo lwe-IARC, njengoko kuchaziwe kwiphepha le-IARC, lucacisa ukuba olu luhlu lwalusekwe kwidatha evela kwizifundo zezilwanyana, kwizifundo ze-epidemiology, kunye "nobungqina obunamandla" beendlela zokusebenza kwe-genotoxic.
* Kananjalo, iphepha lakhankanya kumbhalo osemazantsi iphepha elaphikisana nokufunyanwa kwe-IARC ye-glyphosate njenge-carcinogen enokwenzeka ukuba wabhencwa phantse iminyaka emibini eyadlulayo njengomsebenzi obhaliweyo obhaliweyo weenzululwazi zeMonsanto. Iphepha likaSkinner alikhange likuqaphele oko kweli phepha, enesihloko esithi "Ukuhlolwa kwePhaneli yeNgcali yeGenotoxicity: ubunzima bokuvavanywa kobungqina be-genotoxicity ye-glyphosate, i-glyphosate-based formulations, kunye ne-aminomethylphosphonic acid," yayiyingxaki ngenxa yokungabikho kokuchazwa kokubandakanyeka kukaMonsanto kangangokuba iphephancwadi elalipapasha- Ukuphononongwa ngokuPhambili kwiToxicology -Ukhuphe i “Ukubonakalisa inkxalabo"Kunye ingxelo yokulungisa.
Uphando lukaSkinner luxhaswe sisibonelelo esivela kwiJohn Templeton Foundation. Yena noogxa bakhe baveze iigundane ezikhulelweyo kwi-glyphosate phakathi kweentsuku zabo ezisibhozo kunye ne-14th zokukhulelwa. Idosi, abathi sisiqingatha semali ekulindeleke ukuba singabonisi ziphumo zibi, ayivelisanga miphumo mibi kubazali okanye kwisizukulwana sokuqala senzala. Kodwa abaphandi babone ukwanda okumangalisayo "kwezifo ezininzi ezichaphazela isizukulwana sesibini nesesithathu," ngokuka ukukhululwa kweendaba ukukhuthaza isifundo.
Isifundo sifumene uninzi lwengqwalaselo. Zininzi iindawo zeendaba ezixeliweyo kolu phando, becaphula u-Skinner. I-Bayer AG, inkampani yaseJamani eyathenga iMonsanto kunyaka ophelileyo, ithe isifundo sikaSkinner asithembekanga. Kodwa ulusu Ukhusele ukuchaneka kwesifundo, ecaphula inyani yokuba iphinde yajongwa kwakhona kwaye yapapashwa kwijenali eyamkelweyo yesayensi.
(Inqaku lokuqala lavela nge EcoWeb.)
UCarey Gillam yintatheli kunye nombhali, kunye nomphandi onomdla woluntu Ilungelo lase-US lokwazi, iqela lophando lokutya elingenzi nzuzo. Mlandele kuTwitter ku @iqosweb.
Ukutya kwengqondo, Pesticides Bayer, umhlaza, indawo, EPA, ukutya, glyphosate, impilo, IARC, iphephancwadi, UMichael Skinner, IMonsanto, inzululwazi, Iingxelo zeSayensi, isifundo, IYunivesithi yaseHashington State